Laba Qodob oo Kamida Heshiiska Axsaabta Iyo Madaxwaynaha JSL Wuuxuu Sababi Karaa Khilaaf Hor leh | Baligubadlemedia.com
Laba Qodob oo Kamida Heshiiska Axsaabta Iyo Madaxwaynaha JSL Wuuxuu Sababi Karaa Khilaaf Hor leh
March 6, 2020 - Written by admin
Hadii an aragti kooban ka bixiyo heshiiska malintii shalay dhexmaray asxaabta muxaaridka iyo Madaxeynaha jsl.
Waxan aaminsanahay in laba qodob oo ka mida heshiiskan ay curin doonana khilaaf hor leh oo ka adag kan hada la xaliyay.
Hadaba Wa maxay labada qodob ee heshiiskan ku jira ee khilaafku ka curan doona?
Waxa kale oo iyana sual ah qaybaha uu ka curan doono khilaafkani wa kuwee?
Maxa se daawo u noqon kara ama lagu xalin karaa khilafkaas?
Halkan hoose ayan ku eegi dona jawabaha sualahan sare ku xusan.
1. Heshiskan waxa ku jira qodobka odhanaya in dorashadii labada gole la qabto sanadkan 2020.
2. Qodobka labaad, ee heshiiskan ku jira wa qodobka odhanaya, in komishankii cusbaa, labadii xubnood e asxaabta lagu so daro, isla markaana ay noqdaan komishan jira, balse, awoodaha qabashada dorashada, ay leetihiin, xubnihii hore komishanka dorashooyinku.
QAYBAHA UU SAMAYNAYAN LABADAN QODOB EE KHILAAFKASI KA IMAN DOONO.
Hadii aan aragti ahaan eego, labadan qodob, iyo qaybaha ay samaynta ku yelanayan isla markan aan filayo in ay khilaaf ka curan doono, Waxan halkan hoose ku xusaya qaybahan iyo sababta ay khilaafi donan heshiiskan.
1. Golaha guurtida jsl, oo u samaynayo qodob ka mida labadan qodob, kaasi oo ah, mudada doorashada ee heshiiskan iyo mudo kordhintii ay u sameeyeen golaha barlamaanka, oo is khilaafaya. halka waxan aaminsanahay in golaha guurtidu ka biyo diidi doonan, ayagoo adegsanaya Awoodaha dastuuriga ah ee siinaya mudo kordhinta.
2. Golaha barlamanka oo ah kuwa loo kordhiyay, kuwaas oo ayana ku difaacaya mudo kordhinta dasturiga ah ee lo sameeyay, isla markana ay u sameeyen cidii awooda sharci u lahayd, ayana waxa ay ku doodi doonan in mudada 2 sano ah ee lo korshiyay ay sharci tahay, isla markana aan la burin karin.
3. Gudida komishanka dorashooyinka ee cusub, oo iyana ku doodi doona in ay ayagu shaqadii qabashada doorashooyinka sharcigu siiyay, isla markaana aan gudi kale ama cid kale awood sharci u lahayn in ay qabato shaqada doorashada madama ay ayagu u magacban yihiin.
Hadaba labada qodob ee khilaafku ka curan doono iyo qaybaha uu ka curan doono iyo asbaabaha ay u cuskanayaanba. aragti ahaan sida an so xusay ayan u arkaa, wana aragtidaydii odoroskani laakin ma jirto xog iyo xan aan ka haya midna arrimahan aan ka hadlay.
Qodobka ugu danbeeya. XALKA KHILAAFKAN HADII U SO BAXO.
Waxan aragti ahaan aaminsanahay, in hal qodob kaliya xal u noqon karo, isla markaana dabiibi karo, balse waxan dib ugu dhigan doona qodobka ka hadalkiisa, natiijada, ka so baxda qaybahan, maxa yeelay waxaba surogal ah in ay ka duwanaato sidan hada aan aragti ahaan wax u cabiray.
.Arrintani wa aragtidayda shakhsiga ah .
Cali Xasan Cawaale.